निर्वाचनको सिंहावलोकन - Naya Patrika
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ | माघ २९, २०७४
सात दशकको दौरानमा नेपालमा करिब दुई दर्जन वटा राष्ट्रिय स्तरका निर्वाचन सम्पन्न भए । ति निर्वाचन दोषरहित बन्न सके वा सकेनन् सबैमा जगजाहेर नै छ । संविधानसभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेको संघीय इकाइहरुको छिटपुट घटनाबाहेक भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तीन चरणमा स्थानीय तह र तीन चरणमा प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह र प्रदेशसभाले आफ्नो कामकारबाही सुरु गरिसके भने प्रतिनिधिसभाले पनि चाँडै आफ्नो कामकारबाहीलाई अन्तिमरुप दिएर अघि बढ्नेछ ।
गत १० मंसिरमा पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र ७४ स्थानमा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । जहाँ ३० वटा जिल्लामा वाम गठबन्धनले ‘क्लिनस्विप’ गर्‍यो भने गोरखाको २ नम्बर क्षेत्र र रसुवा जिल्ला कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ‘क्लिन स्विप’ गर्‍यो । २१ मंसिरमा दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लाका १२८ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसमा र २६५ क्षेत्रमा प्रदेशसभाको निर्वाचन थियो । त्यतिबेला पनि वाम गठबन्धनले २४ वटा जिल्लामा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको दुवै सिटमा ‘क्लिनस्विप’ गर्‍यो ।
पहाडी घना वस्तीबाट एमालेले चुनाव जित्दै गर्दा पर्सामा भने निल हुन पुग्यो । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई भेटेर तराईमा भइरहेका प्रोपोगाण्डाहरु रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले देउवालाई राजपाका नेता राजेन्द्र महतोलगायतले आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते तथा मृतकको फोटो र प्रोजेक्टरमार्फत मतदातालाई आकर्षित तुल्याउन भिडियोसमेत गाउँटोल पुगेर देखाएका थिए । अन्य क्षेत्रबाट चुनावमा पराजित भए पनि प्रदेश–२ ले पूर्ति गर्ने ठानेकाले एमाले नेतृत्वको आवाज सुनेको नसुने झैँ भए । अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने देउवाले हेक्का नराख्दा एमालेलाई खाओस् भनेर छोडेको बाघले कांग्रेसलाई मात्रै खाएन त्यसको कोपभाजनमा माओवादी केन्द्र पनि पर्‍यो ।
कांग्रेस प्रदेश–६ र माओवादी काठमाडौँबाट पत्तासाफ !
२००३ सालमा स्थापना भएको साथै प्रत्येक परिवर्तनको साक्षी र अग्रभागमा रहेको पार्टी हो कांग्रेस । पुरानो एवं फरक विरासत बोकेको कांग्रेस तीन पटक स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल पनि हो । र, दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई आपसमा भिडाएर सत्ताकै सेरोफेरोमा रहेको पार्टी पनि हो । त्यहीँ कांग्रेसलाई यसपटकको निर्वाचनको मतादेश ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रदेश–१, ३ र ५ बाट ५/५ सिट, प्रदेश–२ बाट ६ सिट, प्रदेश–४ र ७ बाट १/१ सिट गरी जम्मा २३ सिटमा खुम्चिएको छ । प्रदेश–४ र ७ बाट १/१ सिट जितेर इज्जत धानेको कांग्रेसले प्रदेश–६ बाट भने एक सिट पनि जित्न सकेन । प्रदेश–६ मा वाम गठबन्धनले हुम्ला ख बाहेक बाँकी सबै प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा ‘क्लिन स्विप’ गर्‍यो ।
१० वर्षे सशस्त्र संघर्षपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी पहिलोपटक २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । त्यसवेला ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २२० स्थान जितेर पहिलो दल बनेको थियो ।
राजधानी काठमाडौँका १० मध्ये ६ क्षेत्रमासमेत बाजीमा मारेको माओवादी २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौंमा ‘निल’ भएको थियो । यसपटक एमालेसँग ६०/४० को भागबण्डा गरेर उम्मेदवारी दिए पनि काठमाडौंमा माओवादीको प्रतिनिधित्व सून्य नै भयो ।
एमालेले काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशसभामा १९ स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा माओवादीले प्रतिनिधिसभामा ४ र प्रदेशसभामा १ स्थानमा उम्मेदवारी थियो । एमालेका ५ उम्मेदवार सांसद बने भने माओवादी शून्य हुन पुग्यो । सडक विस्तार, लोडसेडिङ अन्त्यलगायतका पपुलिस्ट काम माओवादी नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँलाई केन्द्रमै राखेर गरे पनि जनताको मन जित्न सकेको छैन । माओवादीलाई सहरी क्षेत्रका जनताले उल्लेख्य मात्रामा पत्याएको यसपटक पनि देखिएन ।
कागजात किर्ते गर्ने पूर्वडिआइजी
डिआईजी नवराज सिलवाल प्रहरी संगठनको आईजिपी बन्ने कसरतमा थिए । तर, सर्वोच्च अदालत दाहिना हुँदा पनि उनको त्यो सपना पूरा हुन सकेन । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि उनी आफूभन्दा जुनियरलाई आईजिपी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले चन्दलाई आईजिपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दियो र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आईजिपी नियुक्त गर्न सरकारका नाममा आदेश पनि । सोही आदेशमा सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा नवराज सिलवाल सबैभन्दा अगाडि रहेको पनि स्पष्ट पार्यो ।
तर, सरकारले कार्य सम्पादन मूल्यांकनकै आधार मानेर अर्का डिआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजिपी नियुक्त गर्यो । त्यसपछि सिलवाल पुनः अदालत गए । उनले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आफू सबैभन्दा अगाडि रहेको दावी गरेका थिए । र, कार्य सम्पादन मूल्यांकन रिर्पोटसमेत पेश गरेका थिए । तर, अर्याललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर नभए पछि उनले प्रहरी संगठनबाट राजीनामा दिए र नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै राजनीतिमा होमिए ।
पार्टी प्रवेश गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट हात पारेका उनलाई ललितपुर –१ का जनताले निर्वाचित पनि गरे । यसबीच सर्वोच्च अदालतले सिलवालले पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन किर्ते भएको प्रमाणित गर्यो र दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दियो । सोही आदेशका आधारमा प्रहरीले उनको खोजी सुरु गर्यो ।
सिलवाललाई पक्राउ गर्न काठमाडौं प्रहरीले ललितपुर प्रहरीलाई पत्राचार गर्‍यो । उनी फेला पर्न नसकेपछि केन्द्रीय प्रहरीले देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो । प्रहरीले उनको ललितपुरस्थित गोदावरीमा रहेको घरमा १६५ जना प्रहरीको टोली पुगेर खानतलासी पनि गर्‍यो । तर, सिलवाल कहीकतै फेला पर्न नसकेपछि प्रहरीले अहिले ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरी गरेको छ । उनलाई पक्राउ गर्नका लागि १९२ देशका प्रहरी खटिएका छन् ।
सिलवालले अदालतमा पेस गरेको कासमू कीर्ते भएको सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित सात जनाको न्यायाधीशको टोलीको बृहत पूर्ण इजलासले ठहर गर्दै छानविन गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलामा आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको पनि उल्लेख छ ।
फरार रेशमलाल चौधरी
७ भदौ २०७२ मा संविधान माथि असन्तुष्टि जनाउँदै पश्चिम नेपालका थारुहरु आन्दोलित भएका थिए । जतिबेला एक बालक र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना प्रहरीको विभत्स तरिकाले हत्या भयो । घटनाका मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरी भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो । उनी फरार भए । अन्य २५ जना अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइए ।
प्रहरीको ‘फरार’ सुचीमा रहेका चौधरीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिए । विना प्रचारप्रसार उनले ३४ हजार ३४१ मत प्राप्त गरी निर्वाचन जिते । चौधरीको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमा एमालेकी मदनकुमारी शाहले १३ हजार ४०६ र कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले ११ हजार २०३ मत प्राप्त गरेका थिए । चौधरी पक्राउ पर्ने डरले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिन आएनन् । उनी विजयी भएको प्रमाणपत्र जिल्ला निर्वाचन आयोगको कार्यालयले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमै पठायो ।
विजयी प्रमाणपत्र वारेसमार्फत पाउनुपर्ने भन्दै उनकी श्रीमतिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् । उनको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले रजिष्टारको आदेश कानुन बमोजिम नै भएको ठहर गरी फैसला गर्‍यो । फैसलामा उनले अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो,‘अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अदालत प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन निवेदकले गरेको पाइएन ।’ त्यस्तै, सरकारको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कैलालीको टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी नभएको ठहर गरेको थियो । राजपा नेपालकोतर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका चौधरी कैलाली –१ बाट दोब्बर मतान्तरले विजयी भएका छन् ।
२५० बढी छोरीचेली बेच्ने वडाअध्यक्ष
महिला बेचबिखनको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नुवाकोटस्थित दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का सुनबहादुर तामाङ पक्राउ परे । उनी विगत २५ वर्षयता मानव वेचविखनमा लागरेको र भारतका विभिन्न चार स्थानमा कोठी (यौनगृह) सञ्चालन गरेको तथ्य खुलेको छ । नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका– १ का तीनजना पीडित महिलाले तामाङविरुद्ध सिआइबीमा जाहेरी दिएपछि उनका कर्तुत बाहिरिएका हुन् ।
तामाङले भारतको नयाँदिल्लीस्थित जेबी रोडको गल्ली नम्बर ६४, पुनास्थित सोना गार्छे–१५, कोलकाता र मुम्बई गरी चार ठाउँमा कोठी सञ्चालन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडितको बयानअनुसार सबै कोठी उनकी श्रीमती राधा तामाङले सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । सुनबहादुरले भारतको विभिन्न सहरका कोठीमा २५० भन्दा धेरै नेपाली युवती लगेर बेचेको र त्यसमध्ये १५० जना नुवाकोटकै रहेको प्रहरीले बतायो ।
तर, चेलिबेटी बेचविखन जस्तो गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेका उनलाई ७ माघमा सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । लगत्तै उनलाई अर्को मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । यता, उनका छोरा रमेश तामाङ अहिले मानव बेचबिखन मुद्दामा नुवाकोटस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् । ४९ वर्षीय तामाङ स्थानीय निर्वाचनमा दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ को अध्यक्षमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भए । तामाङले २०५१ सालबाट नै मानव बेचविखन गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ ।
निर्वाचन जित्ने र लड्ने डनहरु
गुण्डा नाइकेहरू नै चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग छाएको थियो । गणेश लामा, दीपक मनाङे (राजिव गुरुङ), मानबहादुर तामाङलगायको उम्मेदवारीले राजनीतिमा रोचक बनेको थियो । प्रदेश नम्बर ४ अन्तर्गत मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’बाट गुण्डा नाइके मनाङे विजयी भए । २०६१ सालमा चक्रे मिलन र दीपक मनाङे समूहबीच खुकुरी हानाहान भएको थियो । कर्तव्य ज्यानसम्वन्धी मुद्दाअन्तर्गत पाटन पुनरावेदन अदालतले २८ साउन २०६९ मा मनाङे दोषी ठहर गरी ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपक जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गरेको थियो । संविधानको धारा १७८ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाले उनको सांसद पद गुमेको छ । मनाङेलाई पहिला एमालेले टिकट दिएको थियो । पछि उनको व्यापक विरोध भएपछि एमालेले खण्डा लामा गुरुङलाई उम्मेदवारी बनाएको थियो । मनाङेले त्यतिबेला बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । गुरुङले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै मनाङेलाई सहयोग गरेका थिए । दुवैजना राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।
विजय गच्छदारसँगै कांग्रेसमा आएका हुन् अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामा । उनी काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा ‘ख’ बाट टिकट पाएका थिए । त्यस्तै, अर्का उम्मेदवार हुन् रसुवाका मानबहादुर तामाङ । नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्षसमेत रहेका तामाङ ८८ केजी सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परे । उनी अहिले कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिमा थिए ।
पदबाट बर्खास्त पूर्वऊर्जामन्त्री राधा
एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली पूर्व ऊर्जामन्त्री हुन् । उनले मन्त्री पदमा रहँदा सोलु करिडो प्रसारण लाइन बनाउँदा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारको आग्रहमा पदबाट बर्खास्त नै गरेका थिए । १३२ केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेक्क प्रक्रिया नपुर्‍याई अनियमितता गरेको भन्दै ज्ञवालीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७२ असोज एक गते कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । उनलाई एमालेले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ । उनको महिला कोटा खुल्लाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी छिन् ।
नातावाद, कृपावाद र धनवादमा फस्यो समानुपातिक
पहिले झैँ यसपटक पनि निर्वाचनमा धनाड्यहरूको उम्मेदवारीले राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ । खोज पत्रकारिता केन्द्रकाअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेर चुनाव लड्ने व्यवसायीको संख्या ३५ जति छ । विश्वको धनाड्यको सूचीमा रहेका विनोद चौधरीसँगै नवधनाड्यहरु ल्यारक्याल लामा, राज्यलक्ष्मी गोल्छालगायतको नाम समानुपातिकको सूचीमा छ । एमालेमा रहेका चौधरी निर्वाचनको सम्मुखमा कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । उनको नाम अहिले कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा छन् ।
एमालेबाट संविधानसभाको सांसद बनेकी गोल्छा निर्वाचनको आखिरीमा राजपा नेपाल प्रवेश गरिन् । र लगत्तै समानुपातिकको सिट पनि पाइन् । उनले एमालेका प्रभावशाली नेताहरुलाई नै पैसा खुवाएर सांसद भनेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । यतिसम्म कि गोल्छाको विरुद्धमा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै भनेकी थिइन्, ‘हामीले जनआन्दोलनमा बगाएको रगत विष्णुमतिको ढल सरह भएछ ।’
त्यस्तै, लामाको त दरबारमार्गस्थित इन्भेष्टमेन्ट बैकको शाखामा रहेको लकरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मार्दा १४ थान गोली नै भेटेका थियो । उनले दोहोरो नागरिकता लिएकोलगायतका विवादास्पद काम गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अर्थराज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । उनी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा थिए ।
त्यस्तै, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १८ जोडीभन्दा बढीले विभिन्न पार्टीका श्रीमान्–श्रीमतिले टिकट पाएका थिए । निर्वाचनको मुखमा पार्टी प्रवेश गर्दै टिकट लिनेको लर्को पनि बेस्कन रहेको छ भने खुनका फाल्सा र पसिनाका धारा बगाएर संगठन निर्माणमा अहोरात्र जुटेका धेरैजना लाभको पद लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
रातो पासपोर्ट बेच्ने पूर्वसभासदहरु
पहिलो संविधानसभाका सभासदहरुले व्यापक मात्रामा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेर मानव तस्कर गरेका थिए । एमालेबाट समानुपातिक सभासद भएका कैलाली निवासी नारदमुनी राना (थारु) ले रातोपासपोर्ट बेचेका थिए । त्यस्तै, सभासदहरु शिवपुजन यादव, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री शाहले पनि रातो पासपोर्ट बेचेका थिए । उनीहरुलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कैद सजाय गरेको थियो ।
न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले शिवपुजनलाई १ वर्षको कैद फैसला गरेको थियो भने विश्वनाथ र गायत्रीलाई जनही ५—५ महिना कैदको फैसला गरेको थियो । उनीहरुले रातो पासपोर्ट १०-१० लाखमा बिक्री गरेका थिए । त्ययतिबेला विश्वनाथ मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, शिव मधेसी जनअधिकार फोरम र गायत्री नेपाली जनता दलबाट सभासद थिए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा शिवपुजन सर्लाही–४ बाट वाम गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भयो ।
जेलचलना भएका पूर्वभिआइपीहरु
विगतमा नेपालमा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरु पनि सभासद बनेका थिए । पहिलो संविधानसभामा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्ररुपमा जितेका बबन सिंहले व्यापारी राजेश क्यालको हत्याका मुख्य नाइके भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । दुई वटै संविधानसभाको निर्वाचनमा सभासद भएका सञ्जय साह उर्फ टकला अहिले जेलमा छन् । उनी जनकपुरमा बम विष्फोट गराएको, अरुण सिंघानियाको हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका हुन् । सद्भावना पार्टीका नेता श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी पवन संघाइको अपहरण गरेको अभियोगमा जेल चलान भए । पूर्वआपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका गुप्तालाई छोराको विहेकै दिन प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो ।
त्यस्तै, कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका जयप्रकाश गुप्ता (जेपी गुप्ता) मधेस आन्दोलनका चल्तापूर्जा नेता हुन् । उनी भ्रष्टाचारी मुद्दामा चेल चलान भए । नेपालको इतिहासमै बहालवाला मन्त्री जेल चलान हुनेमा उनी पहिलो हुन् । जतिबेला गुप्ता सुचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए । भ्रष्टाचारी मुद्दामा जेल चलान हुनेमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी पनि हुन् । सर्वोच्चद्वारा ओखलढुंगाका उज्जन श्रेष्ठको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सर्वस्वहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेल जेल चलान भएका छन् ।
निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल व्यापक मात्रामा भएको पाइन्छ । निर्वाचन धनपतिहरुको सम्पतिको धमास देखाउने थलो जस्तो भएको छ । निर्वाचन आयोगको कानुनी कागजमा तोकिएको खर्च व्यहोराभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न पाँच करोडभन्दा बढी खर्च भयो ।’
नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले यसपटकको निर्वाचनमा ७ लाख बढी खर्च भएको बताए । निर्वाचनमा ऋण लागेको बताएका उनले नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो र भड्किलो भएकाले आम जनताको पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।
त्यस्तै, कांग्रेसका नेता गगन थापाले आम निर्वाचनभन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन नै भड्किलो भएको बताए । उनले भ्रष्टार न्यूनिकरणका लागि पहिला पार्टीको आन्तरिक चुनावबाट नै सुधार गर्नुपर्ने बताए ।